Burma Partnership » Journalists Silenced in Myanmar – Free the Unity Five
By Amnesty International • April 29, 2015
English Follows after Burmese text
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းထောက်များအား နှုတ်ဆိပ်အောင် ပြုလုပ်နေသည် – Unity မှ ငါးဦးအား လွှတ်ပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်များအား ဝေဖန်မှုပြုသည့် သတင်းထောက်များသည် ၎င်းတို့၏ ဆောင်းပါးပုံပြင်များအတွက်ကြောင့် အဆမတန် ပေးဆပ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြရသည်။ Unity ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်ငါးဦးမှာမူ ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်မှုအားပေး ဆပ်ခဲ့ကြရသည်။ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွင် အစိုးရမှ ၎င်းတို့ ကတိပြုထားသည်များအတိုင်း ပုံနှိပ်သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သတိပေးလိုပြီး၊ ‘Unity မှ (၅) ဦး‘ အား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ် လိုချင်သည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။” ဤသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Unity သတင်းစာမှ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးတင့်ဆန်းမှ ၎င်း၏ တရားခွင်စီရင်မှုအတွင်း ပြောဆိုခဲ့သည့် စကားလုံးများဖြစ်ပါသည်။ မိမိအလုပ်မိမိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသည်ပင် ၎င်းအတွက်အပြစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျနယ် Unity မှ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းရှိ လျှို့ဝှက် ဓာတုလက်နက်များစက်ရုံ စွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးတစ်ခုအား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းစက်ရုံသည် တောင်သူလယ်သမားများထံမှ အဓ္ဓမသိမ်းယူသော မြေပေါ်တွင် ၂၀၀၉ ခု၌ တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံထားသည်။
ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာအား အစိုးရမှ အလျင်မြန်ပင် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊ သတင်းစာ စာစောင်မိတ္ထူများအား သိမ်းယူခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပို၍ ဆိုးရွားသည့် အရာမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးတင့်ဆန်းနှင့် သတင်းထောက် (၄) ဦးဖြစ်သော လူမော်နိုင်၊ ရာဇာဦး၊ ပိုင်သက်ကျော် နှင့် စည်သူစိုးတို့အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားနိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ ဖွင့်ဟမှု၊ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသည့် ဧရိယာသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူမှုများအတွက် စွဲချက်တင်ထားသည်။ ၎င်းတို့အား ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ပခုက္ကူ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ် ချမှတ်ထားသည်။ Unity ဂျာနယ်သည် ထိုစဉ်ကတည်းကပင် ပိတ်ပစ်ခဲ့ရပြီး၊ မိမိအလုပ်အား ဆောင်ရွက်ရုံဖြင့်ပင် ဖမ်းဆီး၊ အကျဉ်းချခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေရသည့် အရိပ်မည်းကြီး တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီဒီယာလုပ်သားများအပေါ် သက်ရောက်စေခဲ့သည်။
သတင်းထောက်ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပေ။
‘Unity မှ ငါးဦး’ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာမှာ သာမန်အကြောင်းအရာ မဟုတ်ပေ – အခြား မီဒီယာလုပ်သား အနည်းဆုံး (၇) ဦး အထိ ၎င်းတို့၏အစီရင်ခံချက်ကြောင့် ယခုအခါတွင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည်။
သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ကျွန်ုပ်အား ဤသို့ ပြောခဲ့ဖူးသည် –
“အစိုးရမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေတုန်းပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အရင်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေထက် စာရင်တော့ အရာတော်တော်များများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေထက် ကျော်လွန်ပြီး သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခံရလိမ့်မယ်။ ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကို အမြဲသိနိုင်ဖို့ကလဲ ခက်ခဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ် ဒါမှမဟုတ် တပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဝေဖန်တာတွေမှန်သမျှဟာ ထောင်ချခံရနိုင်တယ်၊ ခြိမ်းခြောက်ခံရနိုင်တယ်။ သူတို့က ခင်ဗျားကို ဥပဒေတွေသုံးပြီး အရေးယူနိုင်တယ်။”
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် သမ္မတဖြစ်လာချိန်၌ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်များ မြင့်မား ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းမှ မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ မီဒီယာ ဆင်ဆာဖွဲ့ကိုလည်း ရုတ်သိမ်းခဲ့သည် – သတင်းထောက်များအနေဖြင့် သတင်းထုတ်ဝေမှုမတိုင်မီ အစိုးရဆင်ဆာတည်းဖြတ်သူများထံသို့ ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာများအား တင်ပြရန် မလိုအပ်တော့ပေ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်မူ ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားများ (သို့မဟုတ်) မိမိ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ မိမိအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ရုံကြောင့်ဖြစ်စေ အကျဉ်းချခံနေရသူများအားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပေးရန် ၎င်းမှ အများပြည်သူရှေ့၌ ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည်။
စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ သမ္မတအနေဖြင့် စိတ်ပြောင်းသွားကာ ယခင်၎င်းပြောခဲ့သောစကားများအား ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမှီက ဖမ်းဆီးမှုများက ဖော်ပြနေသည်။ သတင်းထောက်များ၊ ငြိမ်းချမ်းသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများနှင့် အစိုးရအား ဝေဖန်အကြံပြုသူများသည် ဖမ်းဆီးခံနေကြရသည်။
ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲများ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်နှင့်အညီ သတင်းထောက်များနှင့် မီဒီယာအား ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှုကို ကမ္ဘာမှ သည်းခံလက်ခံပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရထံသို့ အသိပေးရန်အတွက် ယခုအချိန်သည် အကောင်းဆုံး ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဦးရဲထွဋ်သည် သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွင် Unity မှ (၅) ဦးအား လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုသော သတင်းစကား “#FreeUnity5” ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဝိုင်းဝန်းပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ပါဝင်ကူညီလုပ်ဆောင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ် ပါသည်။[https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts]
By Laura Haigh, Amnesty International’s Myanmar team.
Journalists silenced in Myanmar – free the Unity Five.
“What I want is more media freedom.” These are the words of Tint San, Chief Executive Officer at the Unity newspaper in Myanmar during his trial. His crime? Doing his job.
The government was quick to deny the story and responded by seizing copies of the newspaper. But worse was to come. Within days, Tint San and four journalists Lu Maw Naing, Yarzar Oo, Paing Thet Kyaw and Sithu Soe, were arrested. They were accused of disclosing state secrets,trespassing and taking photos ofarestricted area. They are all now serving seven years in Pakkoku prison in central Myanmar. The Unity newspaper has since closed, castingalingering shadow over media workers in Myanmar, who fear arrest and imprisonment simply for undertaking their work.
One journalist told me:
“The government still has limits. Compared to the previous regime we can get away with many more things, but if you go beyond their limits there will be action. It’s hard always to know, but if you expose anything critical of the military or military affairs you can be jailed, intimidated. They can use the law against you.”
Worryingly, the recent arrests suggest that the President has hadachange of heart, and he is now he is going back on his word. Journalists, peaceful political activists, human rights defenders and people who appear to be criticizing the government are being arrested.
Ye Htut is the President’s spokesperson and Minister of Information. On World Press Freedom Day join us as we flood his Facebook page with messages demanding #FreeUnity5